PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-20 - Masenze okuthile ngesikhathi esikuso
Masenze okuthile ngesikhathi esikuso
Ilanga langeSonto - 2017-08-20 - Izindaba -
Izinsuku zimbi ngempela, uma ulalela kukhulunywa la ngaphandle. Ukuvuka ekuseni ufunda amaphephandaba, ubuke umabonakude, ulalele imisakazo, kuyasho nje ukuthi sifikelwe yisikhathi esinzima, nesiza nobuhlungu obuningi ezimpilweni zethu.
Kunamazwi asebhayibhelini athi “Nithengisise isikhathi, ngoba izinsuku zimbi”. Kunzima ukuqiniseka ukuthi lizothi uma liphuma ilanga, sizozwa izindaba ezithini nokuthi uma lishona lizoshona naziphi.
Umhlaba uyanyakaza, abantu abanakho ukuthula, abanalo uthando nozwelo. Imindeni iyajikelana, esikhundleni sokwesekana, inikane amandla, izizwe ngezizwe ziyavukelana, imiphakathi ibanga into engelutho, nengeke iyibuyisele lutho.
Omunye wabavangeli bala Kwazulu-natali, umvangeli umpungose, wake wabuza umbuzo othi “sikhathini sini lesi?” Ngiyacabanga ukuthi sonke sizibuza lowo mbuzo, wokuthi sikhathi sini ngempela lesi? Uma sifunda ukuguquguquka kwempilo yabantu, emazwenikazi ahlukene omhlaba, uyathola ukuthi izikhathi ezinzima njengalezi zake zafika kwababephila ngaleso sikhathi.
Ungacabanga nje, ukubulawa kwamajuda ayizigidi eziyisithupha, ebulawa omunye wababusi bangaleso sikhathi, owayekholelwa ukuthi ubuzwe babo nokuphila kwabo akusho lutho kodwa bamelwe ukuhlushwa babulawe ngesihluku?
Uma ungacabanga ukuthi kwakunjani ukuba yileso sizwe ngaleso sikhathi, nilale, nivuke nazi kahle ukuthi kunomyalelo owaziwayo kubantu bonke ukuthi anifanele ukuphila nezingane zenu? Ungabucabanga ubuhlungu bezingane ezazibulawelwa abazali bazo, abesifazane ababebulawelwa abayeni babo bengenacala, abazali ababebulawelwa izingane zabo zingenacala? Lobo buhlungu ngeke wafisa ngisho ukuyobona ifilimu obuqoshwe kuyo ngoba ngiyacabanga ukuthi abubekezeleki.
Umuzwa enginawo njengamanje owokuthi siyavivinywa kulesi sikhathi esiphila kuso, ukuthi sesikhule ngokwanele yini ezingqondweni zethu ukuthi sikwazi ukubona ukuthi ukubulalana, ukuzondana nokuhlukumezana kuyinto engasifanele singabantu ikakhulukazi kulesi sikhathi lapho abantu sebenolwazi olu- ngaka lwezinto.
Lokhu kuhlukunyezwa kwabantu besifazane okunonya olungaka kuwuphawu lokuthi nakuba lesi sikhathi bekufanele ngabe sesifunde lukhulu ngamalungelo abantu bonke kodwa sibonakala sikushaya indiva konke lokhu okukhulunywa imihla ngemihla, kuthiwa asihlalisane ngokuthula.
Ukuhlukunyezwa kwezingane, ikakhulukazi zamantombazane, zihlukunyezwa ngabafana okumele ngabe bayazivikela, bazithande, bakuthokozele ukuphila nabo, kusho inkinga enkulu esibhekene nayo kulesi sikhathi.
Ukubulawa kwabantu ngesihluku esesabekayo, umuntu aze angabi namahloni okuphatha ikhanda nezicubu zomuntu, athi uyozidayisa kusho ukulahlekelwa yingqondo nobuntu okusezingeni elingeke sikwazi ukulichaza.
Lesi sikhathi sisiphonsela inselelo emangalisayo, yokuthi sisukume simemezele isikhathi esisha, sokupholisa amanxeba, sithobe izinhliziyo kubantu abahlukunyezwe ngale ndlela eyesabekayo.
Lesi sikhathi sidinga abantu abanesibindi futhi abangangabazi ngamandla kankulunkulu, ukuze silingise inkosi yakwajuda, ujehoshafati, owathi uma eyibona ukuthi impi isizwe sakhe esibhekene nayo, isinkulu kakhulu, ibonakala inamandla aphindaphindiwe kuneyakhe, akangabe elokhu ehlupha, waya ngqo kunkulunkulu wamtshela ukuthi isingaphezu kwakhe.
Lokho kwamsiza ngoba unkulunkulu wamnika icebo lokuthi enze njani wabe esesho uthixo ukuthi Yena-ke uzobe esenzenjani. Masisukumeni sonke sifingqe imikhono, senze utho ngalesi simo salesi sikhathi.
*Usbu Buthelezi ungumsakazi wokhozi FM. Abafisa ukuphawula noma ukuzwakalisa imibono yabo ngale ngosi, bayacelwa bathumele kwi-email ethi: abombuso@gmail. com noma kwifacebook: I am Sbu Buthelezi, kwitwitter:@ Iamsbubuthelezi nakwiInstagram: iamsbu Buthelezi
Nilale, nivuke nazi ukuthi kunomyalelo wokuthi anifanele ukuphila.